အိန္ဒြာ: 1/1/11 - 2/1/11
သုခရိပ်မြုံမှသည် ၂ လပြည့် အလှူငွေနဲ့ ဧည့်ခံကဗျာ
HIV ကူးစက်ခံမိဘမဲ့ကလေးငယ်လေးအတွက်အလှူခံခဲ့တဲ့ သုခရိပ်မြုံမှသည် အလှူပွဲလေးအတွက်အလှူခံခဲ့တာ ၂ လပြည့်ပါတော့မယ်။
အခုလာမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့(၃၀.၁.၂၀၁၁) နေ့အထိ နောက်ဆုံးထားလက်ခံသွားဦးမှာပါ..
အားတက်သရော လှူဒါန်းကြတဲ့ မိတ်ဆွေ ညီအကိုမောင်နှမတွေကို အိန္ဒြာနှင့်တကွ ဒီအလှူလေးဖြစ်မြောင်အောင် ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ပေးနေကြတဲ့
ညီအမ မောင်နှမတွေ အားလုံးက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းလည်း အထပ်ထပ်ပြောကြားချင်ပါတယ်.။
ဒီနှစ်က ငွေဈေးကွာဟမှုရှိနေတာရယ် အလှူအတန်းတွေ များနေတာကြောင့်ရယ်ထင်ပါရဲ့
ခုချိန်အထိ မနှစ်က စံချိန်ကို မကျော်နိုင်သေးပါဘူး။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှ အလှူရှင် ၇၉ ဦးက စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၂၀၇ ၊ ဗမာငွေ ၂၁သိန်း ၃သောင်းခန့်
ဂျပန်နိုင်ငံမှ အလှူရှင် ၃၇ ဦးက ဂျပန်ယန်း ၁၁၇၀၀၀ ၊ ဗမာငွေ ၁၁သိန်း ခန့်
မလေးရှားနိုင်ငံမှ အလှူရှင် ၆ ဦးက စင်ကာပူဒေါ်လာ ၆၂၈ ၊ ဗမာငွေ ၄သိန်း ၂သောင်းခန့်
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ဗမာငွေ ကျပ် ၂ သိန်း တိတိ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ လှူရှင် ၈ ဦးက ဗမာငွေ ၁သိန်း ၂သောင်း
စုစုပေါင်း ၃၉ သိန်း ၇သောင်းခန့် ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်.
ငွေလွှဲတဲ့နေ့ ပေါက်ဈေးများနဲ့ အမှန်တကယ် လွှဲအပ်လှူဒါန်းနိုင်တဲ့ စာရင်းကိုလည်း သာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ကြဖို့ တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်.။
မနှစ်က ၁၁၁ ယောက်က ၄၇ သိန်းလှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပြီး
ဒီနှစ် လက်ရှိ အလှူရှင် ၁၃၁ ယောက်က သိန်း၄၀ အနည်းဆုံး လှူဒါန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်း ၊
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ထဲမှာ လွှဲပြောင်းပေးအပ်လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါကြောင်း
သုခရိပ်မြုံကိုအဓိကထားပြီး HIV နဲ့ပတ်သက်သောလူမှုရေးလုပ်ငန်းများဆေးရုံများကို ပါခွဲဝေ လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါကြောင်း
၃၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားလှူဒါန်းနိုင်ပါသေးကြောင်း
မလှူဒါန်းရမရှိလေအောင် ချစ်ကြည်လေးစားစွာ အသိပေး တိုက်တွန်းနိုးဆော်လိုက်ပြန်ပါပြီ..။
ဒီကဗျာလေးကတော့ အလှူအကြောင်းချည်းဆို ပျင်းနေမှာစိုးလို့ ဧည့်ခံလိုက်တဲ့ သဘောပေါ့..
တကယ်က တစ်ချို့ဆို အလွတ်တောင်ရနေကြလောက်ပါပြီ..။
( အိန္ဒြာ အသစ်မရေးနိုင်ပဲဆားချက်လွန်းလို့လေ)
ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်တိုး လာတဲ့ မိတ်ဆွေ အသစ်တွေ အတွက်ဝေမျှပေးလိုက်တာပါ..။
မနှစ်က အလှူခံပေးခဲ့တဲ့ အခိုးအငွေ့တံတားဆိုတဲ့ HIV ပညာပေးဝတ္ထုလေးကတော့ အလင်းသစ်မဂ္ဂဇင်းမှာထပ်ပုံနှိပ်၊ ဆုလေးတစ်ဆုရတယ်လည်းကြား. နောက်အစ်မမေငြိမ်းက ရသစာအုပ်စင်ပါ လုပ်လိုက်တော့
တော်တော်လေး အမှတ်တရ ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်.။
ဒီနှစ်အတွက် ဒီ ကဗျာလေးကတော့ အဖြူရောင်သက်တံ့ကဗျာရွတ်ပွဲလေးအတွက်ရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ။ အဖြူရောင် သက်တံ့လှုပ်ရှားမှုလေးမှာ မစို့မပို့ပါဝင် ကူညီခွင့်ရခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ..။
ကဗျာလေးကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ အသံအစီးကောင်းအောင် ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.။
အဲဒီ့အမေက သေတာတောင် မျက်လုံးမှိတ်လို့မရတဲ့ သူပေါ့
အဲဒီ့အမေက နှလုံးသားကွဲအက်နေတဲ့ တစ္ဆေတစ်ကောင်ပေါ့..
လီလီဟာ သူမရဲ့ ကော့ရွှန်းနက်မှောင် မျက်တောင်ရှည်ရှည်ကို တဖျတ်ဖျတ် ပြိုးပျက်လို့
ညကြီးမင်းကြီး ဆံနွယ်မှာ ပါးပြင်မှာ လည်တံမှာ သက်တံ့တွေ ဆုတ်ဆုတ်ခဲခဲ ပွင့်လို့
လီလီ့အင်္ကျီက ပါးလွှာကွေ့ဝိုက်လို့ လီလီ့ဂျင်း(န်)ပင်က တိုပြတ်တင်းကျပ်လို့
လီလီဟာ လိုအပ်တာထက်ပိုမိုကိုင်းညွှတ်ပြီး လီလီဟာ လိုအပ်တာထက် ပိုမိုတိုးကပ်ပြီး
လီလီဟာ သူမကိုယ်သူမ အချိုးတကျ ထည့်စပ်ပြီး..လီလီဟာ ကိုယ်ပိုင်ဖေါ်မြူလာအသစ်နဲ့ ကိုယ်တိုင်တစေးဖေါက်ပြီး
လီလီက ပင်စန်ဟီးလ်ပေါ်က ကြောင်မယဉ်သာဟန်ပန်ကို အမြည်းတစ်ပွဲ အဖြစ်ချက်ပြုတ်ပြီး..
လီလီက သူမရင်အုံဖွေးဖွေးပေါ်က ဖန်စီလည်ဆွဲကို အမြည်းတစ်ပွဲအဖြစ် ကြော်လှော်ပြီး...
လီလီ့မျက်နက်ဆန်လေးက အစာကိုချောင်းကြည့်နေတဲ့ ကျီးပျိုနက်မတစ်ကောင်လို
လီလီ့လှုပ်ရှားဟန်တွေက သိမ်းစွန်အသုတ်ခံရခါနီး အသားဆိုင်အသားခဲလို
လီလီက ဘီယာကို သူမကိုယ်သင်းနံ့နဲ့ ရောင်းအား မြှင့်တင်တယ်။
လီလီက သူမကိုယ်သင်းနံ့တွေကို ဘီယာနဲ့ ရောင်းအားမြှင့်တင်တယ်.
လီလီ ဘီယာ ငှဲ့ပေးတယ်။
ယင်မမဲရိုင်းတွေ အုံးကနဲထပျံသွားသလို တသောသော တအုပ်အုပ်တွေထဲမှာ
သူမရဲ့ ရယ်မောသံ ချိုချိုချွဲချွဲကို ဖေါင်းကနဲဖေါက်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ
အကြည့်မီး အကြည့်လျှံတွေ အမြုတ်တစီစီထ ထွက်ကျလာမယ့် ခိုးခိုးခစ်ခစ်ကလေးကို
မ၀ါးပဲမျိုချပစ်နိုင်ဖို့ လီလီ ငှဲ့ပေးနေခဲ့တယ်..
လီလီက သူမ နှုတ်ခမ်းတွေကို ဘယ်ရီသီးယောင်ဆောင်ထားပြီး ၊ ငှဲ့ပေးတယ်..။
လီလီက သူတို့အကြည့်တွေထဲမှာ သူမအပြုံးတွေကို မခို့တရို့ ထိုးစိုက်ထားလိုက်ရင်း ၊ ငှဲ့ပေးတယ်..။
လီလီက သူတို့စကားလုံးတွေကို သူမ တွတ်တီးတွတ်တာနဲ့ လှီးဖြတ်ခုတ်ထစ်ပြီး ၊ ငှဲ့ပေးတယ်..။
လီလီက သူတို့သွေးပြန်ကြောထဲအထိ သူမပါ စီးဆင်းလိုက်ပါဖို့၊ ငှဲ့ပေးတယ်..။
လီလီက တယ်ရီယာခွေးစုတ်ဖွားမလေး ကရုကရင် ဆိုးနွဲ့နေသလိုမျိုး ၊ ငှဲ့ပေးတယ်..။
လီလီက သူမကိုယ်သူမ ရိုက်ခွဲ ပုလင်းထဲ ၀င်ထိုင်ပစ်တဲ့ အထိ ၊ ငှဲ့ပေးတယ်..။
ဘယ်တော့ပြန်လာမယ်မှန်းမသိနိုင်တဲ့သတင်းကို နားမစွင့်တတ်သလို မျက်နှာပေးနဲ့ လီလီက
ဘ၀ကို ကိုင်းကူးကိုင်းဆက် ပျိုးနေရင်း ဘီယာနောက်တစ်ခွက် ငှဲ့လိုက်တယ်...
သူမကိုယ်သူမ အစာအဖြစ်တပ် စိတ်ရှိလက်ရှိထိုင်မျှားရင်း လီလီက
ဘ၀ဆိုတာ ဘီယာလို ခါးတားတားလေးပေါ့ရှင်လို့ ရယ်ရွှန်းပတ်ရွှန်းပြောဆိုပြီး ဘီယာနောက်တစ်ခွက်ငှဲ့လိုက်တယ်...
ကျွန်မက ဘုရားသခင်ရဲ့အကျအပေါက်အမှားအယွင်းတစ်ခုပေါ့တဲ့ ဘီယာနောက်တစ်ခွက် ထပ်ငှဲ့တယ်...
ကျွန်မက အလမ္မါယ်ဆရာ့ ပါးချုပ်ထဲက မြွေမလေးပေါ့တဲ့ ဘီယာနောက်တစ်ခွက် ထပ်ငှဲ့တယ်...
အိပ်တန်းတက်ချိန်မှမရောက်သေးဘဲ နောက်ထပ် ဘီယာငှဲ့လိုက်တယ်...
ညတွေ တသိပ်သိပ်ရွာနေတုန်း လီလီ ဘီယာငှဲ့လိုက်တယ်
အရုဏ်ဦးမှ မဖူးသေးဘဲ၊ မနက်ဖန်တွေမှ မလင်းသေးဘဲ၊ အမှောင်တွေမှ မကုန်နိုင်သေးဘဲ
လီလီ ဘီယာ ငှဲ့လိုက်တယ် ။
လီလီ ဘီယာ ငှဲ့နေတယ်...။
ရုံးအပြန်ချိန်တိုင်းဖြတ်ဖြတ်ပြန်ရတဲ့ ဘီယာဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲက ကိုယ့်ဘာသာ လီလီ လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ချာတိတ်မလေးကို တွေ့ပြီး စိတ်ဝင်စားမိ၊ ငေးမိ၊ ရေးမိ ၊ တွေးမိ ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ..။
လီလီ့ ရှင်သန်မှုတွေ အတိုင်းမို့ ကဗျာက အနည်းငယ် ကလက်တက်တက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်.။
အနုပညာမြောက်အောက် ကလက်နေဖို့ ရယ်လို့ ကိုယ့် ၀မ်းစာရှိသလောက်ကလေး အသေအချာ အားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
စာပေစစိစစ်ရေး ဧ၀ရတ်တောင်ကို မကျော်နိုင်ခဲ့ပါဘူး..။ ခါတိုင်းလို တစ်ချို့တစ်ဝက် ဟိုတစ်ပိုဒ် ဒီတစ်ပိုဒ် တောင်မဟုတ်ပဲ တစ်ပုဒ်လုံး အဖြုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်..။
စိစစ်ရေးမှာ ကျဆုံးခဲ့ပေမယ့် အွန်လိုင်းမှာ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ဂူဂဲလ်တွေ မျက်နှာစာအုပ်တွေကို ကျေးဇူးတင်လို့ မဆုံးပေါ့..။
( သရုပ်ဖေါ်ပုံကတော့ ဒီဇိုင်နာမိုးကြယ်က လက်စွမ်းပြ ဖန်တီးပေးထားတာလေးပါ။)
ဆုံးရှုံးမှုတွေ ထပ်တူညီတဲ့ အခါ
ဒီဝတ္ထုလေးက တစ်လုံးနှစ်လုံးကောက်ရေးလိုက် ချထားလိုက်လုပ်ရတဲ့ ၀တ္ထုလေးပါ။
ပေးချင်တဲ့ message ကြောင့် ရသပိုင်းအားနည်းသလိုဖြစ်နေတာအတွက် စိတ်တိုင်းလည်းမကျချင်ပါဘူး..
ဒါပေမယ့် ချစ်သော ညီအစ်မတွေ အတွက်
( ချစ်သောမောင်နှမတွေ ဖတ်ချင်လည်းရပါတယ်...းP )
ဒီသတင်းကဆူညံမြည်ဟည်းလွန်းစွာ နားစည်ကို အထပ်ထပ်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်နေခဲ့သည်။
ဟုတ်ရဲ့လားဟု သွေးရူးသွေးတမ်းဆန်ဆန် ထပ်မံ မေးမြန်းမိသေးသည်။ ဘာလို့မဟုတ်ရမှာလဲ ငါတို့အားလုံး ဒီ အေ ဖြ ကို မျှော်လင့်ထားပြီးသားလို့ တစ်ယောက်က ပြောလိုက်တာ့ လူက ယိုင်ဆင်းသွားတော့သည်။
သူတို့ဒီသတင်းကိုပြောနေကြပုံက တဆိတ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနိုင်လွန်းနေသည်ဟု စိတ်ပျက်လက်ပျက် ငြိုငြင်နေမိ၏။
လည်ချောင်းတစ်ခုလုံးခြောက်ကပ်နာကျဉ်လာသလို မျက်ရည်ကလည်း ချက်ခြင်းဝဲတက်လာတော့ မျက်တောင် ကို တဖျတ်ဖျတ်ခတ်နေခဲ့မိသည်..။ ခပ်ပိန်ပိန် မလေးအမျိုးသမီးက ကိုယ့်ပုခုန်းကို တစ်ချက်ပုတ်ပြီး မင်းစပီကာကြီး ရုံးပြန်တက်နိုင်ပါ့မလား မင်း တော့ နားအေးပါးအေးရှိပြီပေါ့လို့ဆိုလာပြန်သေးသည်။
မင်းဒီလိုမပြောသင့်ဘူးလို့ ခပ်ဆတ်ဆတ်တုန့်ပြန်လိုက်မိသည်။ မလေးမက အံအားတသင့်ပုံစံနဲ့ကြည့် ပုခုန်း တစ်ချက်တွန့်လိုက်ပြီး လှေခါးအတိုင်းဆင်းသွား၏။နောက် တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်နေ့လည်စာစား အတွက် ဆင်းသွားကြတော့ တစ်ယောက်တည်းကုလားထိုင်မှာ အရုပ်ကြိုးပြတ်ထိုင်ချလိုက်မိသည်။
ကုလားထိုင်ကို တစ်ပတ်လှည့်လိုက်တော့ အဆောက်အဦပုံစံစာရွက်တွေ စာရွက်တွေ စာအုပ်တွေ တစ်ထပ်ကြီး ရှိနေပေမယ့် ရှုင်းသန့်သပ်ရပ်နေတဲ့ စားပွဲ နောက် JN လို့ကျောမှီမှာမင်လုံးကြီးကြီးနဲ့ရေးပြီး အမှတ်အသား လုပ်ထားတဲ့ ကုလားထိုင် ..
ဂျယ်နီ လို့ တိုးတိုးဖွဖွ ရေရွတ်မိလိုက်ချိန်မှာတော့ မျက်ရည်ကထိမ်းမရနိုင်တော့ပဲ ပါးပြင်ပေါ်သို့ တလိမ့်လိမ့် စီးကျလာခဲ့သည်.။
ဂျယ်နီ အခုတော့ ရှင် အစိုးရိမ် အထိတ်လန့်ဆုံး အခြေအနေကို ရှင်လက်ခံလိုက်ရတာတော့ တာပေါ့
ဂျယ်နီ ရှင်ဘယ်လောက် ကြောက်လန့်နေရှာမလဲ ရှင်ဘယ်လောက် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေမလဲ ရှင်ဘယ်လောက် နှမျောတသရှိနေလိမ့်မလဲ
ရှင်သည်းသည်းထန်ထန် ငိုကြွေးနေမှာတော့ သေချာပါတယ်လေ
မျက်ဝန်းကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ပိတ်ချထားမိလိုက်သော်လည်း၊သူမပုံစံကိုကမျက်လုံးထဲမှာ ထင်လင်း ပြတ်သား လို့နေသည်.။
အမြဲတမ်းတက်ကြွဖျတ်လတ်နေသော သူမက သူမယုံကြည်မှုလွန်ကဲနေသော...
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိတိကျကျသေချာသွာခြင်းက သူမအတွက် ကြေကွဲတုန်လှုပ် နေမိခြင်းပင်
သူမကို ဘယ်လိုစကားလုံးကများ နှစ်သိမ့်ပေးနိုင်စွမ်းလိမ့်မလဲ...
သေချာတယ်...ကျွန်မ ရှင့်ကို ဘယ်တုန်းကမှ မုန်းတီးမနေခဲ့မိဘူးထင်ပါရဲ့ ဂျယ်နီ..။
တကယ်တော့ ကျွန်မ အဲသည့်အမျိုးသမီးကို မုန်းတီးနေသည်ဟုထင်မိခဲ့သည်။
အမုန်းဆိုသည်က ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်လောင်စာအဖြစ်ထားပြီး ကိုယ်နှလုံးအိမ်ထဲမှာကိုယ် မီးဖိုနေခြင်းလို့ သိသိ ချည်း သူမအပေါ်ဖြစ်တည်နေမိသည့်ခံစားချက်ကိုတော့
ဖြစ်သင့်သင့်ဖြစ်ထိုက်သော အသွားအပြန်ကိစ္စတစ်ခုလို့သာ တွေးပစ်နေမိသည်..။
တကယ်ဆို ဒေါသဆိုသည်ကလည်း ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ဖြည်သင်ရှုင်းလင်းလို့မရအောင် ကျစ်ထုံးထားမိခြင်းပဲလေ
အဲသည့်မိန်းမနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စတိုင်း ပြသနာ ဒါမှမဟုတ် ဒေါသတို့သာ ကျန်ရစ်ခဲ့တတ်သည်။.။
အဲသည့် မိန်းမဖန်တီးသည့် မကျေလည်ဖွယ်တွေက များပြားလွန်းလှသည်။
မကျေနပ်တိုင်း ဒေါသတွေ ဖြစ်ရတိုင်း မောင့်ကို တိုင်တည်ပြောဆိုမိတော့ ထုံးစံအတိုင်း မေတ္တာပို့ပေါ့ကွာ ဟုသော ရွှေပြည်အေးတရားကိုပင် ကျွန်မက မြင်ပြင်းကပ်နေလေပြီ..။
လူသားတစ်ယောင်နှင့်တစ်ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး တစိမ့်စိမ့်မုန်းတီးနေရခြင်းလောက် ဆင်းရဲပင်ပန်းကြီး သည့် ဒုက္ခမရှိလောက်သည်မှာ သေချာသော်လည်း သူမကို ကျွန်မ မုန်းတီးနေမိသည်.။
မုန်းတီးနေမိသည်.ဟု.ထင်ပါသည်။ ကျွန်မက သူမကြောင့် အလုပ်ကထွက်မည်လို့ပင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ထားမိခဲ့ သည်.။
ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းမှ မဟုတ်လေသည်ပဲ..။ သူမနှင့်ပတ်သက်တဲ့ လူတွေ မမုန်းတီးတောင် အနည်းဆုံး စိတ်ပျက်လက်ပျက် မကြည်မလင်ဖြစ်နေကြရမှာ သေချာလွန်းပါသည်။
ခုတော့ သူမထိုင်ခုံ ကွပ်လပ်ကို ထိုင်ကြည့်နေမိသည်..။
သူမ ခွင့်ယူစရက်နေတွက တစ်ရုံးလုံး တိတ်ဆိတ်လို့ ရုံးဝန်ထမ်းတွေရဲ့မျက်နှာတွေက ပိုမိုကြည်လင် နေသလိုပင်ထင်ရလို့
ကျွန်မရော...ကျွန်မ ဟန်မဆောင်နိုင်လောက်အောင်များ ရွှင်လန်းတက်ကြွနေမိလိုက်သေးသလား......
ဘာပဲပြောပြော ဒီသတင်းကို မကြားခင်အချိန်အထိ ကျွန်မစိတ်တွေ.အနည်းငယ်. လွပ်လပ်ပေါ့ပါး နေသည်ကို တော့ ၀န်ခံရမည်ပင်ဖြစ်သည်။
လူ့အဆင့်အတန်းဆိုတာထဲမှာ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ခြင်း ချစ်ခင်စည်းလုံးမှုရှိသင့်တာ စာနာနားလည်ရမှည်ဆိုတာ၊
ခြေထိုးတာ နင်းတက်တာတွေကို ရွံရှာမုန်းတီးတတ်ရမည်ဆိုတာတွေပါ ပါဝင်နေသည်ကို သိရှိဟန် မတူသော် လည်း
သူမက Pantry room က Cabinet မှာ ပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်တွေ့လျှင်တော့ သူတို့နိုင်ငံတစ်ခုလုံး၏ ဂုဏ်သိက္ခါနှင့်သက်ဆိုင်နေသလိုမျိုး ကမ္ဘာပျက်မတတ်သဲသဲလှုပ်နေတတ်သူမျိူးဖြစ်သည်။
သူမက လူချင်းတူတာတောင် သူ့လူမျိုးဖြစ်မှ လူမျိုးချင်းတူတာတောင် သူ့နိုင်ငံသားဖြစ်မှ ဆိုတာမျိုး လူမျိုးရေး အဆင့်အတန်း အရာရာ ခွဲခြားဆက်ဆံတတ်သည့် ညဉ်ကလည်းရှိနေသေးသည်..။
သူမက သူမ Toilet ၀င်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်မနေရင်တောင်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်က သူမှရှေ့မှာ နှာချေဆတ်မိ ချောင်းဆိုးမိလိုက်ရင်တောင် shit လို့ အားမနာတမ်း ဆဲရေးပြီး ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ပစ်ချ ဆူညံပစ်လိုက်တတ် သူဖြစ်သည်..။
သူမက သူဌေးနဲ့ သူမ အထက်အရာရှိမှန်သမျှနဲ့ဆက်ဆံလျှင် ချိုသာပျော့ပျောင်းစိတ်ရှည်နူးညံ့သလောက် ကျွန်မအပါအ၀င် သူနဲ့တန်းတူ သူ့လက်အောက် ၀န်ထမ်းအားလုံးကို
အထက်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့နေရာက ငုံ့ကြည့်နေရသလိုမျက်နှာပေးမျိုးကိုလည်း ပီပီပြင်ပြင်ပေးတတ်သည်..။
သူမက စကားကို ရိုးရိုးပြောနေရင်တောင် အော်ဟစ်ရန်တွေ့နေသလိုဖြစ်နေပြီး အချိန်ပြည့်နီးပါး စိတ်တိုနေတတ်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သေးသည်..။
သူမ က သူမကို မေးခွန်းမေးလျှင် မကြိုက်တတ်သလိုမျိုး သူများကအကြိုးအကြောင်းရှုင်းလင်း ပြောဆိုသည်ကိုလည်း ဘယ်တော့မှ စိတ်မ၀င်စားတတ်..
အဆိုးဆုံးက..သူမလုပ်တာကိုသာ အမှန်ဟု ထင်နေတတ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
တစ်ရုံးလုံးက သူမကို Speaker လို့ နာမည်ဝှက်ပေးထားပြီး လူနှစ်ယောက်ခေါင်းချင်းဆိုင်နေလျှင် သေချာပေါက်သူ့အကြောင်းပြောနေသည်ကသာများပါလိမ့်မည်..။
ထို့ကြောင့်သာ ထိုသူမမျိုးရဲ့ Assistance ရာထူးနှင့် ကျွန်မ အလုပ်စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့စဉ်ကတည်းက တစ်ခြား ၀န်ထမ်းတွေက သနားသလိုကြည့်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မည်.။
ဗမာလို ရန်တွေ့ဖို့တောင် တော်တော်စဉ်းစားနေရတတ်သော ကျွန်မက သူ့နည်းတူ တန်ပြန် ပြောဆို အော်ဟစ်တတ်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေ့ကျင့်ယူလိုက်ရမလား..။ မသိတော့ပါ..။
ကိုယ့်ကို လူတွေ ဘယ်လိုမှတ်ချက်တွေချနေမှန်း သတိထားရကောင်းမှန်း မေ့လျော့နေတတ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါလေးလောက်တောင် ပြန်မဆန်းစစ် မကြည့်တတ်တဲ့
ကိုယ် အတွက် ကိုယ့်စိတ်ခံစားမှုကိုသာ အရေးပါ အလေးထားနေတတ်သူသော လူမျိုးတွေက လူ့ အဖွဲ့ အစည်း ဆိုတာထဲမှာ အမြဲလို ကန့်လန့် အနေအထားမှာပဲ ရပ်တည်နေတတ်ကြလေသည်လား..
တကယ်တော့ သူတို့ဟာ သိပ်သနားစရာကောင်းနေကြတာပါ..။
လူတစ်ယောက်မွေးကတည်းက ပါလာသည့် စိတ်နေစိတ်ထားဆိုသည်က ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲ သည်ပဲလေလို့ ကျွန်မ ဖြည့်တွေးခဲ့သည်မိကတော့ အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့၏။
သူမနှင့်ကျွန်မ ကြားမှာ စိတ်သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်တာလေးတစ်ခုတော့ရှိနေပြီး...ထိုအကြောင်းကို စကား စမိတတ်လျှင်တော့ နှစ်ဦးသား နွေးထွေးစည်းလုံးနေသလိုရှိနေတတ်သည်။
ရှင်မွေးလွန်းလို့ ကျွန်မ နာမည်ကြိတ်ပေးထားသည့် မလေးရှားသူ နော်မာ သူ့ကလေးလေးတွေ ရုံးခေါ်လာတဲ့ နေ့မျိုးတွေမှာပေါ့..
အဲလိုနေ့မျိုးတွေမှာတော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့မျက်ဝန်း အရောင်လက်ဖြာမှုတွေက ထပ်တူတပ်မျှ တူညီလို့ နင့်မှာလဲ ကလေးမရှိဘူးနော်...ငါ ကလေးလေးတစ်ယောက်လောက် သိပ်လိုချင်တာပဲဟယ်လို့ပြော နေသော သူမ မျက်နှာပေးရဲ့နူးညံ့မှုတွေက သူမ အမြဲလိုရှိနေတတ်သည့်ပုံစံနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် လုံးလုံး ဖြစ်နေ တတ်ခဲ့၏။
ကလေးတွေ ဘယ်လောက်အပြစ်ကင်းစင်လိုက်လဲ ဆိုတာမျိုး ၊ ကလေးလေးကနေ လူကြီးတစ် ယောက်ဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရတာ ဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလဲ ဆို တာမျိုး
စကားလက်ဆုံကျမိကြပြီး ချစ်စရာ မလေးပေါက်စလေးတွေကို ရယ်ရယ်မောမော အတူတူ စနောက်ချီမြှူမိကြ၏။
သူမက ကျွန်မလိုပဲ ကလေးမပြောနှင့် ကလေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်း ပိစိကွေးလေးတွေကိုပါ ချစ် နေ တတ်သူပင်ဖြစ်သည်..။
ကျွန်မ ချစ်လို့ဝယ်လာတတ်သည့် ကလေးပစ္စည်းလေးတွေကို တယုတယ ကိုင်ယူ ကြည့်နေတတ်ပြီး သူချစ်လို့ ၀ယ်လာတတ်သည့်ကလေး ပစ္စည်းလေးတွေကို ကျွန်မကို ပြရန်ဘယ်တော့မှ မေ့လျော့မနေတတ်
တစ်ခုခုဝယ်လာပြီးတိုင်း ငါ့မှာ ကလေးပစ္စည်းတွေကတော့ အများကြီးဖြစ်နေပြီလို့ ညည်းညူသလို ကြေကြေ ကွဲကွဲမြည်တမ်းသလို ရေရွလို့ လည်းနေတတ်သေးသည်..။
ငါ ကလေးလေးတစ်ယောက် သိပ်လိုချင်တာပဲ သိလား..အိုတစ်ယောက်မှ မဟုတ်ပါဘူး ရမယ်ဆို ရသ လောက်ကို လိုချင်တာပါ...
သူမက အဲသလိုပြောတော့ ကျွန်မက အေး..ငါရောပဲ လို့ ရယ်ရယ်မောမောတုန့် ပြန်လို့..
ရင်သွေးဆိုသည်ကို မှန်းဆမြင်ယောင်နေရသည့် စိတ်ကူးယဉ်ကာလအခိုက်အတန့်လေးမှာတောင်..စိတ်နုလုံး တွေ ပျောင်းပျော့နူးညံ့နေပုံက ရင်ခုန်စရာကောင်းလွန်းလှသည်..။
အဲသလို မိခင်စိတ်တွေ ၀င်နေတဲ့ ကျွန်မတို့နှစ်ကြားက နေ့ရက် တစ်ချို့ကတော့ သာယာကြည်လင်လို့ရယ်ပေါ့..။
ထိုနေ့နဲ့ ထိုနေ့က သူမမျက်နှာကို ကျွန်မ ဘယ်တော့မှမေ့နိုင်မည်လဲ မသေချာပါ..။
ထိုနေ့က တနင်္လာနေ့တစ်ရက်ဖြစ်သည်။ သူမ ရုံးကိုရောက်တာ နောက်ကျနေပြီး မျက်နှာပျက် တိတ်ဆိတ် နေသည်ကိုလည်း သတိထားမိလိုက်သည်..။
ထမင်းစားချိန်လောက်ရောက်တော့ သူမက လေသံခပ်တိုးတိုးနှင့် ကျွန်မ ကို ခေါ်လိုက်သည်.။
မေ ငါပြောစရာရှိလို့ ကျွန်မ သူ့အနားကို ထိုင်ခုံ အနည်းငယ်တိုးရွှေ့လိုက်မိသည် အထိ သူမ ဘာများ ရစ်ဦး မလဲဆိုသည့်သံသယစိတ်တစ်ခုက ကျွန်မ မှာရှိနေဆဲပင်.
ငါ့ သားအိမ်ထဲမှာ အလုံး နှစ်လုံး ရှိနေတယ်တဲ့ ငါ မနေ့ က ဆရာဝန်နဲ့စစ်ဆေးထားတာ...
အို ... ကျွန်မ ဘယ်လိုမှ ထင်မှတ်မထားတဲ့ စကားပဲ...။ ကျွန်မ သူမကို စိုးရိမ်တကြီး ကြည့်လိုက်မိသည်..။
တစ်လုံးက ရိုးရိုး သွေးလုံးပဲ နောက်တစ်လုံးကတော့ ကင်ဆာလို့ သံသယရှိတယ်ပြောတယ်..
ငါ ခွဲစိပ်ပြီး အသားစကို စစ်ဆေးပြီးရင်တော့ ကင်ဆာဆို ငါ့ သားအိမ်တစ်ခုလုံး ထုတ်ပစ်ရတော့မယ်...
အဲဒါဆို .ငါ...ကလေး မရနိုင်တော့ဘူး သိလား..၊ ငါ ကလေးမရနိုင်တော့ဘူး..
သူမ ပြောရင်း မျက်ရည်ကျတော့ ကျွန်မ အလွန်အမင်း အံ့အားသင့်သွားမိသည်..။ ဒီလောက် မာရည် ကြောရည်နိုင်သည့် မိန်းမ မာနသိပ်ကြီးသည့် မိန်းမက ကျွန်မရှေ့မှာ မျက်ရည်ကျနေသည်တဲ့..
အိုးးးးဂျယ်နီ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး သားအိမ်ထဲမှာ သွေးလုံးဆိုတာမျိုးက ဖြစ်တတ်တာပဲ နောက် ဟုတ်သည်ဆိုဦးတော့ လိုအပ်မှ ထုတ်မှာပါ မစိုးရိမ်ပါနဲ့..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နင် အလုပ်တွေ ကို ပို ဂရုစိုက်ပေးပါနော်...
စိတ်ချ ကျွန်မ ကတိပေးတယ် ရှင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ ဂရုစိုက်ပါ ဂျယ်နီ
သူမ မပြောနှင့် ကျွန်မရင်ထဲမှာတောင် ပူလောင်လို့နေခဲ့ပါသည်..။ ကင်ဆာ ..ကင်ဆာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ တွေးပစ် နေမိသည်.။
ဒါ့ထက် ရှင် ဘာလို့သွား စစ်တာလဲဟင်..
ငါ စစ်မကြည့်တာ ကြာပြီ ၊ ခုတလော ငါ့ ရာသီလာတာ ရက်တွေ မှားနေတယ် တစ်လထဲ ၂ ခါ ၃ခါ တွေဖြစ်တယ် နောက် Blood peice တွေပါလာတာပဲ..
အဲဒါကြောင့်..... နင်ရော...နင်လည်း စစ်ကြည့်သင့်တယ် လို့ ငါထင်တယ် Ploy Clinic တွေ မှာ ဈေးသိပ်မကြီးဘူး အို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နင် လည်းစစ်ကြည့်ပါလို့ ငါတိုက်တွန်းချင်တယ်......၊
သူ့ကိစ္စအတွက် ပူပင်သောကတွေကြားက ကိုယ့်အတွက် စိတ်ဝင်တစား ပြောနေတော့ သူမအပေါ်ထားရှိ မိခဲ့သော စိတ်ငြိုငြင်မှုတွေ ချက်ချင်းပျောက်သွားသလိုပင် ခံစားလိုက်ရသည်.
ရင်ထဲမှာ စိုးရိမ်စိတ်တွေနှင့် ဘုရား ..ဘုရား......
ဒီလောက် လန်းဆန်းတက်ကြွနေတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးထွားကျိုင်းလှပ နေတဲ့ အမျိုးသမီး ဆီမှာ....
အဲသည့်နောက်နေ့က စလို့ ဂျယ်နီခွင့်ယူ သွားခဲ့သည်မှာ ယနေ့ထက်ထိတိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
သူမ အော်ပရေးရှုင်းဝင်မယ့် ရက် မရောက်ခင် အထိ ကျွန်မ က ကင်ဆာ မဟုတ်ပါစေနဲ့ ၊ ဂျယ်နီ ကလေး လေး တစ်ယောက်တော့ရနိုင်ခွင့်ရှိနေပါစေဦးလို့ ဆုတွေတောင်းပေးနေခဲ့ပါသေးသည်..။
ကျွန်မ အဲသည့် အတွေးကို နေရာပင် ဗြုန်းကနဲရပ်ပစ်လိုက်မိသည်...။
အဲဒီ့နေ့ အိမ်ပြန်ရောက်ကတည်းက ကျွန်မက သားအိမ်ကင်ဆာနဲ့ ပတ်သက်သမျှ အချက်အလက်တွေကို သွေး ရူး သွေးတမ်းဆန်ဆန် ရှာဖွေ ဖတ်မှတ်နေခဲ့မိ၏။
(ကရကဋ်)၊ ရာသီခွင်ကိုမှီးပြီး ကင်ဆာလို့အမည်ရလာတယ်ဆိုတာမျိုးက အိပ်မက်ဆန်ပြီး ၊ ဟိုးးးးဘီစီ ၄၀၀ လောက်ကတည်းကပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ ရောဂါဆိုတာ သိရတော့ အံသြမိပါသည်..။
အခုဆို ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာ ကျိမ်စာဆန်တဲ့ ရောဂါဆိုးတွေ ကြောက့်ရွံ့ထိတ်လန့်စရာ ရောဂါဆိုးတွေ ဘယ် လောက်တောင်များပြားနေခဲ့ပြီတဲ့လဲ..။
ကျွန်မ လက်သင့်သလောက်ဖတ်မိသည်များကို စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ် ကူးယူးနေမိခဲ့ပါသည်..။
သားအိမ်ထုတ်ဘို့ လိုတယ်-မလိုဘူးဆိုတာ ရောဂါအဆင့် စောလို့နဲ့ နောက်ကျလို့ ၂ မျိုး ဖြစ်နိုင်ပါပြီး ၊ အဆင့် (၁) ဆိုရင် cervix (သားအိမ်ခေါင်း) နေရာတခုတည်းမှာသာ ကင်ဆာ တွေ့ရမည်
ဲ့ ဒါဆို ဂျယ်နီသာ ကင်ဆာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအဆင့်မျိုးဖြစ်နိုင်နေနိုင်မလဲ..။
ကုသမှုရွေးချယ်ခြင်းမှာ အရွယ်အစား၊ ဖြစ်သည့်နေရာနှင့် ကလေးယူ-မယူ ဆိုတာတွေကို ထည့် စဉ်းစားပါပေးသည်ဆိုတော့ သူမအတွက် စိတ်အနည်းငယ် ပေါ့ပါးသလိုရှိမိပြန်သည်။
ဂျယ်နီရဲ့ရောဂါ အခြေအနေဟာ အဆင့်(၁) လောက်ပဲရှိနေဦးမှာပါ ကျွန်မ ကိုယ်ဖြစ် စေချင်သည်များ ကိုသာရွေးချယ်တွေးတောနေမိခဲ့၏။
Cancer Research UK အဆိုအရ Stage 1 ကို ၄ ဆင့်ထပ်ခွဲထားတယ်တဲ့
1A1 = ၉၈-၉၉%
1A2 = ၉၅-၉၈%
1B1 = ၉၀-၉၅%
1B2 = ၈၀% ပျောက်ကင်နှုံး ရှိတယ်တဲ့ ..။ ရှင် သိပ်စိတ်ပူမနေပါနဲ့ဦး....ဂျယ်နီ
Human Papilloma Virus (HPV) ဆိုတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သားအိမ်ကင်ဆာဟာ အိန္ဒိယမှာဆို တစ်မိနစ်တိုင်းတစ်ယောက်သေဆုံးနေသည်ဆိုတာမျိုး
တစ်နာရီတိုင်း ၈ ယောက်စေဆုံးတယ်ဆိုတာမျိုး အမျိုးသမီးတွေမှာ ရင်သားကင်ဆာပြီးရင် သားအိမ် ကင်ဆာ ရောဂါက အဖြစ်အများဆုံးဆိုတာမျိုးတွေ ကိုတော့ ကျွန်မ ကျော်ဖတ်ပစ်လိုက်ချင်ပါသည်..။
တကယ်ဆို သားအိမ်အ၀ ကင်ဆာက အသက်ကြီး ၄၅ ကနေ ၅၅ အထိမှာအဖြစ်အများဆုံးဆိုပေမယ့် Jade Goody ဆိုတဲ့ ဗြိတိန်က တီဗွီ မင်းသမီးဟာ အသက် ၂၇ မှာ ဒီရောဂါနဲ့ဆုံးပါးခဲ့တယ်ဆိုပြန်တော့
ဂျယ်နီဆို အသက် ၄၀ ကျော်စပြုပြီထင်ပါရဲ့ ကျွန်မတို့လို ၃၅ ပြည့်ပြီးသား အမျိုးသမီးတွေ အတွက်ဆိုရင်ရော..
နောက်တော့ ကျွန်မက အင်တာနက်ကနေ Link တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု လျှောက် ၀င်ကြည့်မိသည်.။
သားအိမ်ကင်ဆာသည် အများအားဖြင့် စောစောပိုင်းမှာ ဘာလက္ခဏာမှ မပေါ်လို့ ကင်ဆာ ရှိနေမှန်း မသိနိုင် ပါတဲ့
Human Papilloma Virus (HPV) ဗိုင်းရပ်စ်မှတဆင့်ဖြစ်သည့်အတွက် လိင်ဆက်ဆံတာကနေ ကူးစက်နိုင် သည်တဲ့..။ မွေးလမ်းမှာ ကြွက်နို့ဖြစ်တာနဲ့လဲ ဆိုင်သည်တဲ့..
အချိန်အခါမဟုတ် မွေးလမ်းကနေ သွေးဆင်းခြင်း။
သွေးဆုံးပြီးမှ သွေးဆင်းခြင်း အတူနေပြီး သွေးဆင်းလာခြင်း
သွေးမဟုတ်ဘဲ အရည်ဆင်းခြင်း အနံ့ဆိုးထွက်တာမျိုးလဲ ရှိနိုင်သည်တဲ့
အဖြူ၊ ပန်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အညိုရောင်တွေလဲ ဆင်းတတ်သည်တဲ့..
စာတွေကို ဖတ်ရင်း ကျွန်မ တစ်ကိုယ်လုံး ကြောက်စိတ်တွေနှင့် ပူလောင်နေခဲ့ပါသည်..။
သားအိမ်ကင်ဆာကို ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရတယ်ဆိုတော့ ကျွန်မ ထိတ်ကနဲဖြစ်လို့သွား၏.။
သားအိမ်ကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး ဈေးကွက်ထဲမှာ အလွယ်တကူဝယ်လို့ရနေပြီဆိုပဲ။
HPV vaccine (Gardasil) ဆိုသည့်ဆေးက HPV types 6, 11, 16, 18, 31, 45 တွေကို ကာကွယ်ပေးပြီး ၉၈% ထိသည်ဟု သိရသည်။
GlaxoSmithKline ဆေးက ၉၂% ထိရောက်သည်။ သားအိမ်ကင်ဆာ ၇၀% ဖြစ်စေတဲ့ HPV strains 16 and 18 တွေကို ၄ နှစ်မက အကာကွယ် ပေးသည်တဲ့..
Cervarix ဆေးလည်း လည်း မကြာပြီလာတော့မည်ဟု ဖတ်ရတော့ ချက်ချင်းဆိုသလို စိတ်တွေ ပေါ့ပါးသွားသလိုပင်ဖြစ်သွားခဲ့၏.။
တတ်ကျွမ်းသည့် ဆရာဝန်တွေနဲ့ တိုင်ပင်မှပါလေ လို့သာ ကျွန်မ အထပ်ထပ် ရေရွတ်နေခဲ့မိသည်။
အိမ်ထောင်ပြုပြီး ကလေးမရနိုင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မတွေမှာပိုပြီး အဖြစ်များတတ်သေးသည်တဲ့...။
ကျွန်မက ကိုယ်နှင့်မဆိုင်သလို ဒီလိုရောဂါတွေကို အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ နေလာခဲ့မိသည်ပဲ..။
ကျွန်မဟာ ဘယ်အထိများ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတတွေ နဲ့ ကင်းဝေးတဲ့နေရာမှာ နစ်မြုတ်နေခဲ့ ရသည်လဲ..။
ဂျယ်နီရော.. ဘယ်လို အဖြေမျိုးထွက်လေမည်လဲ..။
သူမ စိတ်အခြေနေကရော ဘယ်လိုများရှိမေလေမည်လဲ..။
မေးခွန်းတွေ ကြားမှာ ကျွန်မ မောဟိုက်နေခဲ့သလို..ဂျယ်နီ့ အပေါ်မကြေလည်မှုတွေကို ကျွန်မ မေ့လျော့နေခဲ့မိပြီး
ဖြစ်နိုင်လျှင် သူမ လက်ဖ၀ါးတွေကို တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ပြီး အားပေးနေချင်ခဲ့ပါသည်..။
ဒီနေ့ရောက်ရှိလာသည့် ဂျယ်နီ့ခွဲစိပ်မှုအောင်မြင်ပြီး နေကောင်းနေပါသည်ဆိုသည့်သတင်းကို ၀မ်းသာ လိုက်ပေးလိုက် ရမှာ လား ၊ သားအိမ်ရော မျိုးဥအိမ်တွေ ပါ ခွဲစိတ်ထုတ်ယူပစ်လိုက်ရသည် ဆိုခြင်း အတွက် ယူကျုံးမရဖြစ်နေရမှာလား ..မသိနိုင်တော့ပါ။
ငါ့မှာ ကလေးပစ္စည်းလေးတွေကတော့ အများကြီးဖြစ်နေပြီဆိုသည့် သူမရဲ့နူးညံ့နေသည့်မျက်ဝန်းတွေကိုချည်း ကျွန်မမြင်ယောင်နေမိပါသည်.။
သူမမှာသာ ကလေးလေးတစ်ယောက်လောက်ရှိခဲ့လျှင် သူမစိတ်တွေ နူးညံပျောင့်ပျောင်းနေမလား
သူလိုချင်တာမရလို့များ သူ့စိတ်တွေ လိုတာထက်ပိုခက်ထန်နေခဲ့လေသည်လား..စသဖြင့်တွေ ကျွန်မ အယောင် ယောင် အကန်းကန်းတွေးတောနေမိပြန်လေသည်။
ကျွန်မမှာရော...ဒီလို သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေတွေထဲမှာ ကျွန်မနဲ့ ဘယ်နှစ်ချက် လောက်များ ကိုက်ညီ နေခဲ့ပါလိမ့်
တကယ်လို့များ ဒီဘ၀မှာ ကိုယ်ပိုင်ကလေးလေးတစ်ယောက်တစ်လေကိုမှ ထွေးပိုက်ခွင့် မရနိုင်သည့်ကိုယ်ဖြစ်ခဲ့ ပါလျှင်၊ အတွေးနဲ့တင် နှုံးချိကြေကွဲသွားမိသည်ကအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်
ကျွန်မလို ကဗျာတွေရေးတတ်ပြီး မောင့်လို အေးဆေးလိမ်မာသည့် သမီးလေးတစ်ယောက်လောက်......
မောင့်လို ကွေးကွေးကောက်ကောက် ဆံနွယ်လေးတွေသာ ရှိနေခဲ့လျှင် ကျွန်မ ဆော့ဖွကစားလို့ ၀နိုင်မည် မထင်ပါ..
ကျွန်မလို ခဲခဲ ဆစ်ဆစ် တွေလျှောက်တွေးပြီး မောင့်လို့ ဘုကလန့်လေးပြောတတ်လျှင်တော့ ကျွန်မရယ်မော နေမိမည်ထင်ပါသည်..။
အို ဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ မဖြစ်နိုင်ဘူးပဲဖြစ်စေ...ကျွန်မက ဒီအိပ်မက်ကို ဆက်ရွေ့ မက်နေနိုင်သည်ဆိုသည်ကပင် ဘယ်လောက်ကံကောင်းလိုက်သည်လဲ.လေ။
ကျွန်မက မျက်ရည်တွေကို လက်ဖမိုးနဲ့သုတ်ယူလိုက်ချိန်မှာတော့ ရုံးသူတွေ တဖွဲဖွဲပြန်ရောက်လာကြပြီဖြစ်သည်။
မျက်ရည်စက်လက်ကို မြင်ဖြစ်အောင်မြင်လိုက်သော Ting Ting က ကျွန်မကို အံ့အားတသင့်ကြည့်နေခဲ့သည်။
ကျွန်မက မောင်ရေ ဂျယ်နီ့ကို အရမ်းသနားတာပဲလို့ ကျွန်မကပြောတော့ မင်းတို့ မိန်းမတွေပဲ အမျိုးမျိုးလို့ မောင်က ခနိုးခနဲ့တုံ့ပြန်လာခဲ့သည်..။
လူသားချင်းစာနာမှုဆိုတာ ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းတွေရဲ့ အပြင်ဖက်မှာ ၊ အာဃာတရန်ငြိုးတွေရဲ့ အပြင်ဖက်မှာ
အသားအရောင် ဘာသာတရားတွေရဲ့ အပြင်ဖက်မှာ..ကရုဏာ သီးသီးနဲ့တည်ရှိနေတဲ့အရာပါ
ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းဟာ ကိုယ်ချင်းစာတရားတစ်ခုတည်းပါပဲ..
ဆုံးရှုံးမှုတွေ တူညီကြတဲ့ အခါမှာ အချင်းချင်း မုန်းတီးနေမိကြသူတွေ သဘောထား ကွဲပြားနေမိကြသူ တွေ အလိုလိုစည်းလုံးလာနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်..
ကျွန်မ အသံက စူးရှမာကြောနေပါလိမ့်မည်..။ တင်းမာပြတ်သားနေပါလိမ့်ဦးမည်..။
ဖုန်းခွက်ကို ခပ်ဆတ်ဆတ်ပြန်ချမိလိုက်ချိန်မှာ ကျွန်မရင်ပြင်က လှိုင်းထန်နေခဲ့သည်.။
ကျွန်မ မျက်လုံးကို တင်းတင်းပိတ်ထားမိပြီး အသက်ကို ၀အောင်ရှုသွင်းလိုက်မိရင်း၊ မောင့်ကို ဒီလို မာရေ ကျောရေ ပြောလိုက်မိတာအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိခဲ့၏။
အို...သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ချစ်သူတွေ လင်မယားတွေ ကြားထဲမှာတောင် ဒီလိုပဲ ခံယူချက်တွေ ကွဲလွဲနေတတ် သည် ပဲလေ..
ကျွန်မက ဂျယ်နီ အမြန်ပြန်ကောင်းပါစေလို့ မပျက်မကွက် ဆုတောင်းနေမိဦးမည်သာဖြစ်လေသည်....။ ။
တကယ်လို့ တတ်သိနားလည်သူတွေက မှားယွင်းနေခဲ့ရင်၊ ဖြည့်စွက်ပေး ချင်ကြရင် ကွန်းမန့် မှာ ၀င်ရောက် ရေးသားပေးခဲ့ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်..။
သုခရိပ်မြုံမှသည် အလှူပွဲလေး ဒီဇင်ဘာတစ်လစာ သာဓုခေါ်နိုင်ကြစေဖို့
ပထမဆုံး နှစ်သစ်မှာ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာ ကျန်းမာကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သလိုက်ပါတယ်..။
HIV ကူးစက်ခံမိဘမဲ့ကလေးငယ်လေးတွေ အတွက်နဲ့ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကို ဝေမျှလှူဒါန်းနိုင်ဖို့သုခရိပ်မြုံမှသည် အလှူပွဲလေးအတွက် အလှူငွေကောက်ခံခဲ့တာ တစ်လတိတိပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်..။
ခန့်မှန်းခြေ ခုလက်ရှိငွေဈေးနဲ့ ၃၂သိန်းလောက်တော့ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်..။
အခု ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိရရှိထားတဲ့ အလှူငွေစာရင်းလေးကို
နှစ်ဦးမှာ သာဓုခေါ် မုဒိတာပွားနိုင်ဖို့ရယ်
မေတ္တာကရုဏာရှေ့ထားပြီး လှူဒါန်းလိုကြသူများ မလှူလိုက်ရမရှိလေအောင် နိုးဆော်တိုက်တွန်းနိုင်ဖို့ရယ်..ပိုစ့်လေးအဖြစ်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..။
နေ့စဉ်တိုးပွားလာတဲ့ အလှူရှင်စာရင်းတွေကို ဆိုဒ်ဘားမှာ ဖေါ်ပြပေးနေပါတယ်...
အားလုံး ငွေဈေးတွေ မကျဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါဦး...။
( အလှူ အတွက်ရော ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပါ ဆုတောင်းပြီးသားဖြစ်တာပေါ့လေ.းP.။)
၄၉)ဒေါ်မိမိကြည်၊ သမီးဆွေဇင်ရဲ S$၅၀
၅၂)ကိုသော် + မအိအိ$၅၀
အလှူရှင်(၅၃)ဦးထံမှ အလှူငွေ စင်ကာပူဒေါ်လာ
၂၉)ကိုလင်းအောင်ဖေ+မကြိုင်ကြိုင်လတ် သမီး သိရိနွယ် ￥၃၀၀၀
ဂျပန်ယန်း ( ၁၁၇၀၀၀)ရရှိထားပါတယ်.။
ဂ)ဆရာတော် ဦးပဏ္ဍ၀ ရန်ကုန် Rs 500
အလှူရှင်(၉)ဦးထံမှအလှူငွေမလေးရှား ရင်းဂစ်( ၅၃၀)
ဘယ်ပန်းချီဆရာမှ မစပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အရောင်အသွေး ဆေးစက်တွေကျခဲ့ရာ ..
သာမာန်လူတွေ နားလည်လို့မရတဲ့ စိတ်အဆင်အသွေးနဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်
စည်းသတ်ချက်တွေ၊ ဥပဒေသတွေ၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေ၊ မိရိုးဖလာတွေ နဲ့ ကင်းဝေးခဲ့တဲ့
အရာအားလုံးနဲ့ လွတ်မြောက်နေတဲ့ လွတ်မြောက်သံစဉ်တွေ ……………….
ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ .. အမေ့မေ့ အလျော့လျော့ ပေါ့ပေါ့လျော့လျော့နဲ့ပါပဲ …
ဒါတွေအားလုံးကို တည်မြဲမှု လို့ ထင်ခဲ့ .. (ဘယ်လောက်ရူးနှမ်းလိုက်သလဲ ..)
အဲဒီအရောင်တွေထဲကနေ ပြန်ခေါ်ယူလို့မရတဲ့ ငှက်တစ်ကောင်လို ငါ ပျံထွက်ခဲ့မိသလား
(တစ်ယောက်ကပြောတယ် အဲဒီပန်းချီကားထဲမှာ နဂိုတည်းက ငှက်တစ်ကောင် ပါဝင်မနေခဲ့ဘူးတဲ့)
တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ အရောင်တွေ အရိပ်တွေ
ပြီးတော့ ဝင်သက် ထွက်သက်တွေဘယ်သောအခါမှ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ ဆေးစက်တွေ …
ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် နာကျင်မှုတွေ .. လမ်းအဆုံးမှာ ဘာရှိမယ်မှန်း မသိပဲ ဆက်နေရတဲ့ ခရီးတွေ …
ဝန်ပိုမတင်ချင်ပါပဲ ကောက်ကောက်တင်နေရတဲ့ ပညတ်ချက်တွေ … နီတိအကျိုးအပဲ့တွေ
လူ့ကျင့်ဝတ်မျက်နှာဖုံးတပ်ထားတဲ့ အမနာပ မစ္ဆိယစိတ်တွေ …
ဒါတွေတစ်ခုမှမပါဝင်တဲ့ .. ခု ဆိုလက်စ သက်ငြိမ် ပန်းချီကားတစ်ချပ်ရဲ့ သံစဉ်က ..
တကယ်တော့ ဒီဇင်ဘာကိုင်းဖျားကိုင်းနားက ပန်းပွင့်လေးတွေရဲ့ပုံတူပဲ ..
ပွင့်ဖတ်တိုင်းရဲ့ အသံထွက်က လန်းဆန်းစိုပြေလို့..
နောက် တစ်ကြိမ်ပြန်ပွင့်ခွင့်မရှိတဲ့ ဆေးစပ်တွေနဲ့ ချိုမြိန်ခဲ့သမျှ
အလွမ်းတွေကတော့ ချင်းချင်းရဲအောင်ဆက်တိုက်ပွင့်ဝေခဲ့ ...
အဲဒီသီချင်းကို မဆိုချင်တော့ဘူး.... ……………………..
တစ်နာရီ....နောက်ထပ်တစ်နာရီ.... တစ်စက္ကန့်တိုင်း အရွေ့အလျားက လှောင်ပြောင်နေသလို....
စိတ်တခေါ်အမျှော်အဝေးအတိုင်း.....ဒီဇင်ဘာဟာ...အလွမ်းနဲ့ ထွက်ခတ်ခတ်သွားခဲ့ပြန်ပေါ့....။ ။
သုခရိပ်မြုံမှသည် အလှူပွဲလေး ဒီဇင်ဘာတစ်လစာ သာဓုခေါ်န...